अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले वैशाख ६ गतेदेखि हकप्रद निष्कासन गर्दै
चैत २०, काठमाडौं । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले वैशाख ६ गतेदेखि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले हाल कायम एक कित्ता शेयर बराबर नयाँ शून्य दशमलव ५ कित्ता शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले रू. १०० अंकित दरका ५२ लाख ४१ हजार १९७ कित्ता हकप्रद जारी गर्ने भएको हो । हकप्रद निष्कासनका लागि कम्पनीले चैत ९ गते बुकक्लोज गरेको थियो । बुक क्लोजको आधारमा चैत ८ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुले मात्र उक्त हकप्रद शेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीको हकप्रद शेयरको विक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । उक्त हकप्रदमा मुक्तिनाथ क्यापिटल, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, ट्रेड टावर, थापाथली, मुक्तिनाथ विकास बैंकका शाखा कार्यालयहरु साथै धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा सेवामा सहभागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै मेरोशेयर सफ्टवेयरमार्फत पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीको हकप्रदलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी डबल बी प्लस इस्यूअर रेटिङ प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको जनाउँछ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ४ करोड ८२ लाख ३९ हजार ४०० रहेको यस हकप्रद निष्कासनपछि उक्त पूँजी रू. १ अर्ब ५७ करोड २३ लाख ५९ हजार १०० पुग्नेछ । कम्पनीले हकप्रद निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डबाट फागुन २५ गते अनुमति पाएको हो । कम्पनीको हकप्रदमा आवेदकले वैशाख २६ गतेसम्म आवेदन दिन पाउनेछन् ।